Feno ny trano ary tsy nisy te hisaraka mandram-parainan'ny andro nandritra ny fety izay nafanain'i "Prince du Salegy" Wawa tao Colmar France. Manohy ny fitetezana an'ny France ny tarika Wawa, ka rahampitso zoma 27 desambra izy, dia hiazo an'i Lyon, ka hanafana ny lanonana ao amin'ny Salle le Brin d'herbe, 4 rue Calmette 69 740 Genas Lyon. Hiazo an'i Marseille kosa izy ny sabotsy 28 desambra, ary hitotorebika ao Paris ny alin'ny 31 desambra anaovana veloma ny taona 2019. (Jereo Sary Tohiny)
Fianarana hatrany ny fiainana. Manaporofo izany i Irene Russell, izay vavy antitra efa 99 taona nefa mbola mianatra, ary vao nahazo diplaoma amin’ny ambaratonga faharoa tao Magee, Vancouver, tanàna isany be mponina any Colombie-Britannique Canada. Voatery nijanona tsy nianatra ka nikarakara namelona ireo zandriny i Irene Russell ny faramparan’ny taona 1930 rehefa nodimandry ny ray aman-dreniny. Tapa-kevitra ny hiverina an-tsekoly hanohy ny fianarana nilaozany 70 taona lasa i Irene Russell, ary ny sekoly nianarany farany ihany no nianarany ka nanazoany diplaoma izao. Nanomanan’ny sekoly fety manokana ny fanolorana ny diplaoman’i Irene Russell, satria voalohany no nisy vavy antitra nilofo tamin’ny fianarana toy azy izao tany Colombie-Britannique. (Jereo Sary Tohiny)
Mpanakanto frantsay nalaza tany amin’ny taona 60 sy 70 i Alain Barrière. Nodimandry tao Carnac (Morbihan) ny alarobia 18 desambra 2019, teo amin’ny faha-84 taonany izy. Alain Bellec no tena anarany fa Alain Barrière no anarana tena nahalalan’ny olona azy tamin’ny sehatry ny hira. Isany hira nahafantaran’ny maro azy, eny fa na taty Madagasikara aza, ny « Tu t'en vas », ny « Pour la dernière fois ». Amin’ny alatsinainy 23 desambra no handevenana azy. Tamin’ny fiandohan’ity volana desambra 2019 no nahafatesan’i Agnès Cohen-Solal vadiny, teo amin’ny faha-69 taonany. Vavy tokana ny zanak’izy ireo, Guénaëlle Barrière. (Jereo Sary Tohiny)
Mitohy ny fitetezana ireo firenena eoropeanina ataon'i "prince de salegy" Wawa, avy tany Belgique izy, dia izao mihazo an'i France izao miaraka amin'ny tarika iray manontolo. Hafana ny fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona 2019, satria dia sesilany ny lanonana izay ataon'i Wawa: 21 desambra ao Colmar27 desambra ao Lyon28 desambra ao Marseille31 desambra sy ny 4 janoary 2020 ao Paris Hiavaka ny fetin'ny asaramanitra, hanaovam-beloma ny taona 2019 ary hiarabana ny taona vaovao 2020, satria dia hiaraka hanafana ny lanonana ao amin'ny 47 rue des Solets Rungis, i Wawa, Big MJ, Lico Kinikike, ary Rijade ny 31 desembra 2019. (Jereo Sary Tohiny)
Mitsingerina androany ny faha-83 taona nahaterahan’i Papa Ray Masina Fransoa sady Evekan'i Rôma-Italia. Nanamarika ity taona 2019 ity ny fitsidihana pastoraly nataony teto Madagasikara ny 6 ka katramin’ny 10 septambra 2019. Jorge Mario Bergoglio no tena anarany, teraka ny 17 desambra 1936 tao Buenos Aires, Arzantina izy. Izy no Papa, dimbin’i Piera, faha-266 eo amin’ny tantaran’ny finoana Katolika.
« Lavo Ralava », io no anisany teny nentin’i Rossy, ao amin’ny pejiny io hariva io, nampahafantatra ny besinimaro, ny sakaizan'ny kanto momba ny fahafatesan-dRalava. Mpikambana, mpively aponga maro anaka, sady mpihira ao amin’ny tarika Rossy i Ralava. Nolazoin’ny aretina fotoana elaela i Ralava. « Tumeur ao amin ny lohany ao no fototr’aretina», raha ny fampitam-baovao nataon’i Rossy tamin’ny volana oktobra 2019, fotoana nampihombo ny aretiny. Nisava nirakotra ny fahasalaman-dRalava taorian’izay. (Jereo Sary Tohiny)
« Miss Guadeloupe » i Clémence Botino, izy no voahosotra ho « Miss France 2020 » nandritra ny fifaninana natao tao Marseille ny sabotsy 14 desambra. Clémence Botino no mandimby an’i Vaimalama Chaves « Miss Tahiti » tompon’ny anaram-boninahitra tamin’ny 2019. 22 taona i Clémence Botino, mpianatra amin’ny lalampiofanana « Master Histoire de l'art » ao amin’ny oniversiten’i Sorbonne any Frantsa izy. Clémence Botino no « Miss France » faha-90 tamin’ny tantaran’ity fifaninanana hatsaran-tarehy amam-bika any Frantsa ity. (Sary nindramina)